Xiisad colaadeed oo ka jirta gobolka Sanaag - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandXiisad colaadeed oo ka jirta gobolka Sanaag
Xiisad colaadeed oo ka jirta gobolka Sanaag
March 14, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia, Somaliland 0
Gaadiid dagaal ay leeyihiin ciidamo Puntland oo ku sugan gobolka Sanaag. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Xiisad colaadeed ayaa lagu soo waramayaa in ay ka jirto gobolka Sanaag.
Sida ilo-wareedyo dhanka ammaanka katirsan ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror xiisada ayaa korodhay kadib markii ciidamo ka kala socda Puntland iyo Somaliland ay tageen gobolka maalmihii u dambeeyay.
Ciidamo ka socda labada dhinac ayaa la sheegay in ay ku sii jeedaan magaalada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag, iyada oo laga cabsi qabo in dagaal uu ka dhex qarxi karo labada dhinac.
Wefdi katirsan Puntland oo ay ku jiraan wasiiro ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay gaaray deegaano kuyaala gobolka Sanaag.
Asbuucii lasoo dhaafay ciidamo aad u hubeysan oo ka socda maamulka Somaliland ayaa yimid deegaanka Yube, halkaas oo ay ka sameysteen saldhig.
Talaadadii, Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku eedeeyay Somaliland in ay daandaansi milatari ka wado gobolka Sanaag, waxaana uu sheegay haddii Somaliland ay joojin weydo gardarada ay la kulmi doonto cawaaqib xumo.
Sanadkii lasoo dhaafay, labada maamul ee deriska ah ayaa dagaal khasaare badan dhaliyay uu ku dhexmaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sanaag, halkaasoo ay weli isku horfadhiyaan labada ciidan.
Waxay u muuqataa in Puntland iyo Somaliland ay markale ku dagaalami karaan gobolka Sanaag, oo isagu ka xiisad yaraa marka loo barbardhigo dagaalka labada dhinac ku dhexmarayay gobolka Sool muddo sannooyin ah.
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s intelligence forces have foiled a suspected al-Shabab car bomb attack after the forces conducted and operation in Warta Nabada district in the Somali capital, Mogadishu, official said. Spokesman of the Banadir [...]
Puntland President fires counter-piracy director
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland’s President Abdiweli Mohamed Ali has fired Puntland counter-piracy director Abdirisak Mohamed Dirir otherwise known as “Ducaysane”, according to a presidential decree issued on March 19, 2017, seen by Puntland Mirror. The firing came one [...]
Puntland oo ku eedaysay Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay dagaal ku soo qaaday hanaanka waxbarashadeeda
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa ku eedaysay Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay dagaal ku soo qaaday hanaanka waxbarasho ee ka jira Puntland, sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada Jaamac Dabaraani maanta kadib kulankii asbuuclaha ah ee golaha [...]